ROUTER ကို TRENDNET တက်ချိန်ညှိခြင်း - ROUTER က - 2019
သင်သည်မည်သည့် software ကို install လုပ်သည့်အခါလုံးဝအမှားများကိုအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အဘို့အ boilerplate တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အကြံပေးချက်ကိုမရှိပါ။ ဒီပြဿနာတွေကိုပေါ်ပေါက်ရေးအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်: ဒါပေါ်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးအစား, OS ဗားရှင်း, နည်းနည်း, malware နဲ့။ Nvidia တိုဂရပ်ဖစ်ကတ်များများအတွက် software ကို install လုပ်သည့်အခါအတော်လေးမကြာခဏအမှားများရှိပါတယ်။ ယနေ့အနေနဲ့ Nvidia တို drivers တွေကိုအမှားတွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်လူကြိုက်အများဆုံးသူတွေကိုဆွေးနွေးကြမည်နှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း၏ထိရောက်သောနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုပြောပြပါ။
သင်သည်သင်၏ video card ကို Nvidia တိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install ပြဿနာများရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, မစိတ်ပျက်လက်ပျက်လုပ်ပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာသင် bug တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရကူညီပေးပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရဲ့စတင်ရန်ကြပါစို့။
မှားယွင်းနေသည် 1: Setup ကို Nvidia တိုပျက်ကွက်
အလားတူအမှားကတော့ Nvidia တိုကို install နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာလေးပစ္စည်းများကိုပြသသတိပြုပါ, ဒါပေမယ့်သင်ပိုမိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းပါလိမ့်မယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲယာယီအမှားများ - အောက်ခြေလိုင်းအားလုံးကိစ္စများတွင်တဦးတည်းရှိရလိမ့်မည်။ နည်းလမ်းများစွာအတွက်အမှားပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါ။
တရားဝင်ယာဉ်မောင်း Installing ။
အဘယ်သူမျှမအခြေအနေမျိုးမှာသင်ကသံသယရှိနှင့်အတည်မပြုနိုင်သောဆိုဒ်များကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပြီးကြောင်း software ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဤအရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Nvidia တိုရှိသေး၏။ သင်သည်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှယာဉ်မောင်းဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါက, Nvidia တို, ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်အဲဒီမှာကနေ software ကို download လုပ်ပါ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ် drivers တွေကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဟောင်းယာဉ်မောင်းလုံးဝနေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကိုဖယ်ရှားမည်ကိုအထူးပြု software ကိုသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ကျနော်တို့ဒီ tool Display ကိုယာဉ်မောင်း Uninstaller သို့မဟုတ် DDU သုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
တရားဝင် download စာမျက်နှာတွင် utility ကိုသွားပါ။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ကမ္ပည်းရှာနေကြသည် "ဤတွင်တရားဝင်ဒေါင်းလုပ်"။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုအောက်တွင်တည်ရှိသည်။ သင်ကမြင်သောအခါ, ရုံအမည်ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
ထို့နောက်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ချက်ချင်းဒေါင်းလုပ်ကိုစတင်ပါ။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာသင် file ကို run ရမည်ဖြစ်သည်။ က extension ကိုအတူတစ် archive ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက « .7z »သင်တို့သည်တစ်ခုလုံးကို contents တွေကိုဖြည်ဖို့ folder ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ installation files များ Extract လုပ်ပါ။
အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်သင် file ကို unzipped ရှိရာ folder ကိုသှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရှာနေဖိုင်တွေအားလုံးကိုများ၏စာရင်းထဲတွင် « Display ကိုယာဉ်မောင်း Uninstaller »။ အဲဒါကို run လိုက်ပါ။
program ကို install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသတိပြုပါ။ သငျသညျကိုစတငျသညျ့အခါ « Display ကိုယာဉ်မောင်း Uninstaller » ဝင်းဒိုး utility ကိုတစ်ကြိမ်ဖွင့်လှစ်။
startup mode ကိုရွေးချယ်ခြင်း။ ကျနော်တို့က default value ကိုစွန့်ခွာဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် "Normal" ကို။ ရှေ့ဆက်ရန်, အောက်ပိုင်းလက်ဝဲထောင့်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပုံမှန် Start".
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းသင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ် adapter ၏ထုတ်လုပ်သူကို select ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျွန်တော့် Nvidia line ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထိုအခါကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းတဲ့အဟောင်းယာဉ်မောင်းများ၏သင်၏ system ဆုံးဖြတ်။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သငျသညျကို select ကြောင်းအကြံပြု "ကိုဖျက်နှင့် reboot"။ ဤအကြောင်းအရာအဖြစ်နီးကပ်စွာတတ်နိုင်သမျှ program ကို registry ကိုနှင့်ယာယီဖိုင်တွေမှယခင် software ကိုဖွင့်၏ဖိုင်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျဖယ်ရှားရေး၏တပ်မက်လိုချင်သောအမျိုးအစားပေါ် click လုပ်သည့်အခါသင်တို့သည်ဤ drivers တွေကိုဝန် settings ကို၏ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအကြောင်းကြားစာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းစွာအထား, utility ကို « Display ကိုယာဉ်မောင်း Uninstaller » ဂရပ်ဖစ် drivers တွေကို download လုပ်ပါမှ software များ updates တွေကို Windows ရဲ့စံထား applications များတားဆီး။ ဒါဟာမဆိုအမှားများကိုပါဝငျမထားဘူး။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ" ဆက်လက်။
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ system ပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းမှဖိုင်များကိုဖယ်ရှားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူကလက်စသတ်သောအခါ, ထိုအစီအစဉ်ကိုအလိုအလျှောက်သင့် system reboot ပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့အားလုံးကျန်ရှိသောဖိုင်တွေဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်, သင်ကသင်၏ Nvidia တိုဂရပ်ဖစ်ကဒ်အသစ် drivers တွေကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
virus software နဲ့ anti-virus ကို။
ရှားပါးကိစ္စများတွင်အထက်ပါအမှားသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် "အသကျရှငျ" အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောပိုးမွှားကိုသိရှိနိုင်ဖို့ပွတ်ဆွဲစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ်။ တခါတရံကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့်ဆန့်ကျင်-Virus ဆော့ဖ်ဝဲကိုအတူရောက်စွက်ဖက်လို့မရပါဘူး။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျကိုမတှေ့နိုငျစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဗိုင်းရပ်စ်လျှင်, သင်၏ antivirus ကို install လုပ်မယ့်အနေဖြင့် Nvidia တိုယာဉ်မောင်းများအတွက် unplugging စမ်းပါ။ တခါတရံသူကကူညီပေးသည်။
မှားယွင်းနေသည် 2: မှားယွင်းနေနည်းနည်းနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်စနစ်ကဗားရှင်း
ဒါဟာအမှားမကြာခဏသင်မောင်းသူကို select အခါသင်ရိုးရှင်းစွာင်း၏ operating system ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်နည်းနည်းနက်ရှိုင်း၏ဗားရှင်းတစ်ဦးအမှားလုပ်ဆိုလိုသည်။ သငျသညျအဲဒီ settings တွေကိုမသိရပါဘူးလျှင်သင်အောက်ပါလုပျဆောငျရမညျ။
ကျနော်တို့ desktop ပေါ်မှာ icon ကိုကြည့်နေကြတယ် "My Computer ကို" (နောက်ပိုင်းတွင်ကို Windows7နဲ့သည်), သို့မဟုတ် "ဒီကွန်ပျူတာ" (Windows 8 ကိုသို့မဟုတ် 10) ။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် Context Menu က မှစ. , select လုပ်ပါ "Properties ကို".
အခုတော့ Nvidia တိုမှ download စာမျက်နှာတွင်သွားပါ။
သင်၏ video card ကိုစီးရီးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် Enter နှင့်၎င်း၏မော်ဒယ်သတ်မှတ်။ ဂရုတစိုက်ယင်း၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကနည်းနည်းအပေါ်အခြေခံပြီးလာမယ့်လိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ အားလုံးအချက်များအတွက်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ် "ရှာရန်".
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်သင်သည်တွေ့ရတဲ့ယာဉ်မောင်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်လွှတ်ရာဒေါင်းလုပ်ဖိုင်အရွယ်အစား, ယာဉ်မောင်းဗားရှင်းနှင့်ရက်စွဲသတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျထောကျပံ့သောဗီဒီယိုကတ်များများစာရင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရိုးရှင်းစွာခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခုဆိုရင် Download".
ထိုအခါသင်သည်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ဖတ်ပါ။ ဒေါင်းလုဒ်စတင်ရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Accept and download".
လိုအပ်သော software ကိုဒေါင်းလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရုံ download ပြုလုပ်စောင့်ဆိုင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်ရှိသည်။
မှားယွင်းနေသည် 3: အဆိုပါ setting ကိုမမှန်ကန်ကြောင်းကဗီဒီယိုကဒ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါအမှားပုံရိပ်မှာအနီရောင်ဘောင်မီးမောင်းထိုးပြပါကအလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်သငျသညျကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကားမောင်းသူသင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူးသူကပြောပါတယ်။ သင်ရုံအမှားတစ်ခုလုပ်ပါလျှင်, သင်ရုံကုမ္ပဏီ Nvidia တိုများအတွက် download စာမျက်နှာတွင်သွားပြီးဂရုတစိုက်အားလုံးနယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ထို့နောက် software ကို download လုပ်ပါကထည့်သွင်းပါ။ ထိုအခါမူကားသင်အမှန်တကယ်ကြှနျုပျ၏ဗီဒီယိုပုံစံမဟုတ်လော ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအောကျပါလုပျဆောငျရမညျ။
သော့ကိုပေါင်းစပ်နှိပ်ပါ «ဦးဝင်း» နှင့် « R ကို» ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက် "Run ကို"။ ဒီ window တွင်သင်သည် code ကိုရိုက်ထည့်ရပါမည်dxdiagနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, သင် tab ကိုသွားပါရှိရမည် "Screen" (စာရေးကိရိယာကို PC များအတွက်) သို့မဟုတ် "Converter" (Notebook) ။ ဒီ tab မှာ, သင်သည်သင်၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေ့နိုင်ပါသည်။ လည်းစာရင်းနှင့်၎င်း၏မော်ဒယ်ပါလိမ့်မည်။
စံပြသိမှတ်ကြလော့, အ Nvidia တို site ကိုမှသွားနှင့်သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်း load ။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်သင်သည်သင်၏ adapter ၏မော်ဒယ်ထွက်ရှာတွေ့မှထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ရမထားဘူးဆိုရင်, သင်အမြဲ device ကိုများ၏ ID code ကိုပေါ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်း ID ကိုအားဖြင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များအတွက် software ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လိုကျနော်တို့သီးခြားသင်ခန်းစာတွင်ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့သင် Nvidia တိုများတပ်ဆင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရှိစေခြင်းငှါအသုံးအများဆုံးအမှားအယွင်းများပြသပါ။ အကြှနျုပျတို့သညျထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအမှားသည်သင်၏စနစ်၏တစ်ဦးချင်းစီဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါတယ်သတိပြုပါ။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျအထကျဖျောပွထားမှတ်ချက်များကိုရေးသားဖို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာအခွအေနေဖြေရှင်းပေးရန်နိုင်ရင်လျှင်။ ကျနော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီအမှုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: How to see password of connected wifi broadband. . .In full detail also can we hack it??? eps#3 (အောက်တိုဘာလ 2019).